Fahasamihafana eo amin'ny mpitsara sy ny mpitsara | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany Fahasamihafana eo amin'ny mpitsara sy ny mpitsara | Ampitahao ny tsy fitovizan'ny teny mitovy amin'izany
Home / Public / Legal / Justice system / Fahasamihafana eo amin'ny mpitsara sy ny mpitsara
Fahasamihafana eo amin'ny mpitsara sy ny mpitsara
15 Novambra 2011 Narotsak'i Olivia
Mandre ny fitsarana ataon'ny mpitsara iray izahay ary raharaha henon'ny mpitsara tokana na ny mpitsara iray. Ny teny mpitsara sy mpitsara dia nanjary mahazatra loatra, ary efa zatra mihaino sy mahita ireo teny ireo amin'ny fanaovana pirinty ka tsy dia jerentsika loatra ny fahasamihafan'izy ireo. Ny roa dia teny mifandraika amin'ny lahatsoratra sy olona mitazona lahatsoratra mitovy ary manao asa mitovy amin'izany. Saingy, misy ny tsy fitoviana eo amin'ny andraikitra sy ny andraikitry ny mpitsara sy ny mpitsara izay hasongadin'ity lahatsoratra ity.
Ny mpitsara dia olona mahay lalàna ary voatendry hihaino raharaha any amin'ny tribonaly. Ny andraikitra sy ny andraikitry ny mpitsara dia mety tsy hitovy amin'ny firenena iray, fa amin'ny ankapobeny dia izy no tompon'andraikitra amin'ny raharaham-pitsarana ary manapa-kevitra ny amin'ny fehezan-teny ho an'ny antoko na olona iray meloka izy ary koa manome vola. sazy. Misy ny mpitsara ao amin'ny Fitsarana Tampony izay antsoina koa hoe mpitsara na mpitsara federaly, ary mahay mihaino raharaha misy resaka fandikana lalàna na lalàm-panorenana. Ireo mpitsara ireo, na izany aza, dia afaka mihaino fitsapana an'ny olona ihany koa. Ny fanapahan-kevitry ny mpitsara ao amin'ny Fitsarana Tampony dia farany ary mamatotra ny antoko na ny mpitaraina satria fitsarana avo indrindra io.
Ny mpitsara any amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany dia mihaino raharaha ary miantso vavolombelona hijerena ny marina ambadiky ny raharaha. Ireo mpitsara ireo dia manana fahefana hanapa-kevitra momba ny maha meloka na tsy fananan-tsiny an'ny olona iray ary manome sazy mifanaraka amin'izany.
Ny mpitsara dia tsy maintsy miseho ho marina sy mahitsy amin'ny fotoana rehetra, fa tsy mitongilana amin'ny toe-javatra na olona. Ankoatr'izay dia mety handray fanapahan-kevitra arakaraka ny voalazan'ny lalàna izy fa tsy mifanaraka amin'ny zavatra tiany na tsy tiany.
Ny mpitsara dia vondron'olona voatendry handray fanapahan-kevitra amin'ny raharaha iray izay mety niakatra fitsarana. Ny fanapahan-kevitry ny mpitsara dia antsoina hoe didim-pitsarana na didim-pitsarana amin'ny fomba mitovy amin'ny mpitsara tokana. Ny mpitsara dia manara-maso ny fizotran'ny fitsarana mba hanomezana sazy ny meloka na hanafaka olona tsy manan-tsiny. Ireo olona manao jury dia voatonona anarana ho mpitsara. Tsy voatery ho mahay lalàna ny mpitsara ary olona manankarena indrindra amin'ny sehatra samihafa. Raha ny marina, araka ny filazan'ny sasany, ary marina ny azy, ny mpitsara dia tsy tena matihanina fa manome fitsarana tsy miangatra.
Ny porofo sy ny vavolombelona dia eo anatrehan'ny mpitsara izay manadihady ny porofo sy ny antontan-taratasy rehetra alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra. Ny teny hoe mpitsara dia avy amin'ny mpitsara frantsay izay midika ara-bakiteny hoe mianiana.
Inona no maha samy hafa ny Mpitsara sy ny mpitsara?
• Ny jury dia vatan'ny olona nianiana fa olona tokana ny mpitsara.
• Ny mpitsara dia misy mpitsara izay olona nalaina avy amin'ny fari-piainana samihafa ary nianiana fa handray fanapahan-kevitra na didim-pitsarana tsy mitanila. Ny mpitsara dia olona mahay lalàna, ary tendrena hanapa-kevitra amin'ny raharaham-pitsarana sy handany fitsarana.
• Ny mpitsara dia mpitsikilo zava-misy kokoa raha ny mpitsara kosa dia tompon'andraikitra amin'ny lalàna ary tsy maintsy manome didim-pitsarana araky ny voalazan'ny lalàna.
Fahasamihafana eo amin'ny fahamarinana sy ny mpitsara Fahasamihafana eo amin'ny tribonaly sy ny tribonaly Fahasamihafana eo amin'ny lalàna sivily sy ny lalàna iraisana Fahasamihafana eo amin'ny mpitsara sy ny mpitsara Fahasamihafana eo amin'ny mpampivelona sy ny mpitsabo
Filed Under: rafi-pitsarana , ny hafa , asa matihanina Tagged amin'ny: dabilio ny mpitsara , federaly mpitsara , mpitsara , mpitsara vs , mpitsara , mpitsara vs , juries , Juries vs , jurors , mpitsara , mpitsara vs , mpitsara , anjara asa sy ny andraikitry ny mpitsara , andraikitra sy andraikitry ny mpitsara , mpitsara tampon'ny fitsarana
Fahasamihafana eo amin'ny SiO2 sy ny CO2
Fahasamihafana eo amin'ny sekoly amerikana sy ny sekoly japoney
Fahasamihafana eo amin'ny tavy mahasalama sy tsy matavy
Fahasamihafana eo amin'ny demokrasia sy ny kaominisma
Fahasamihafana eo amin'ny tahan'ny zanabola sy ny zanabola raikitra